IPorto ikhiphe iJuventus emncintiswaneni we-UEFA Champions League | Scrolla Izindaba
IPorto ikhiphe iJuventus emncintiswaneni we-UEFA Champions League
IPorto ikhiphe iJuventus ku-UEFA Champions League ngemuva kokushaya igoli esikhathini esengeziwe, yawina umdlalo ngokuthola amagoli amane uma kuhlanganiswa amaphuzu eqembu.
IPorto ingene ngokulingana ngamabili kwelilodwa emlenzeni wasekhaya futhi ibukeka sengathi izobeka indawo kuma-quarter final ngemuva kokuthola iphenalthi bashaya elilodwa eqandeni bebhekene neSergio Olivera.
Kodwa-ke, umgadli wePorto uMehdi Taremi ukhahlele ibhola ngokucasuka okwenza ukuba athole ikhadi lesibili eliphuzi wabe esekhishwa enkundleni sekusondele isikhathi sekhefu.
Iqembu lika-Andrea Pirlo iJuventus lidlale kahle esiwombeni sesibili ngesikhathi umdlali obolekiwe uFederico Chiesa eshaya amagoli amabili okuqala.
IJuventus, eyaziwa ngokuthi ‘i-The-Old Lady’ ibidinga elinye igoli ukuze idlulele phambili kodwa u-Olivera ushaye igoli eliqinisekise iPorto ukunqoba.
Igoli elishaywe ngumdlali wasesiswini weJuventus u-Adrian Rabiot licishe lenza umehluko, kodwa bekungekho abebengakwenza omphetha be-Serie A.
IJuventus, engekho esimweni esihle, isendaweni yesithathu kwiligi yayo yasekhaya, futhi isele ngamaphuzu ayishumi kubaholi i-Inter Milan enomdlalo esandleni. Kumasizini amathathu edlule, iJuventus ikhishwe yi-Ajax, neLyon manje bakhishwe yiPorto, njengoba bonke abalandeli beqembu bebelindele ukuwina.
U-Andrea Pirlo uthe, akasabi ukuthi angahle alahlekelwe ngumsebenzi.
“Ngiyimenenja yeJuventus futhi ngizosebenzela iphrojekthi enkulu edlulela ngale kwale sizini,” esho.
Umdlalo wama-quarter final alo mncintiswano uzoba mhla zi-19 kuNdasa.
Umthombo wesithombe: @Sportsnation